“Dagaalka Galkacyo ma aha dagaal qabiil; wuxuu ahaa dagaal looga soo horjeedo argagixisada” M/weyne Faroole. – Radio Daljir
Garowe, Sept 04 – Wafti uu hogaaminayo madaxwaynaha Puntland Dr. C/raxmaan Sh. Maxamed Faroole ayaa saaka barqonimadii ka duulay garoonka diyaaradaha ee magaalada Garoowe si ay uga qaybgalaan shirka wadatashiga arrimaha Soomaaliya ee maanta ka furmay magaalada Muqdisho.
Madaxwaynaha ayaa garoonka kula hadlay saxaafada ka hor intii aanu ka duulin garoonka, kana hadlay xaalada magaalada Galkacyo oo iska-horimaadyo ka dhaceen laba maalmood oo is xiga.
Maamulka Galmudug ee koonfurta gobolka Mudug ayaa uu ku eedeeyey in ay qayb ka ahaayeen dagaalkii labada maalmood ka dhacay Galkacyo.
Mar uu ka hadlay dedaalada nabadeed ee ay ku jiraan Issimada gobolka Mudug ayuu yiri “xabad joojin ayaan samaynay inta ay kala baxayaan odayaashu dhalinyarada ay Al-shabaab ka duufsatay oo ku dhex dhuumanaya magaca qabiilka; waxaana ugu baaqaynaa odayaasha, wax garadka, iyo culumaa’udiinka in ay kala baxaan dhalinyarada iyo raga la khalday ee gacanta siinaya Al-shabaab”.
Dilalka iyo qaraxyada ka dhaca magaalada Galkacyo ayaa la sheegaa in ay fuliyaan kooxo taabacsan Al-shabaab oo gabaad ka dhigta xaafadaha Garsoor iyo Wadajir ee magaalada Galkacyo.
M/weyne Faroole ayaa uga mahadceliey Issimada iyo shacabka deegaanka Galgala in ay hadda si toos ah ula shaqeeyaan maamulka Puntland, isla markaasana go’aansaday in ay iska saaraan waxa uu ugu yeeray cadowga aan cidna dhaafayn, isga oo sheegay ay haatan deegaanka Galgala yahay deegaan nabdoon.
Si kastaba ha ahaatee, waftiga M/weyne Faroole ayaa lagu wadaa in ay isla maanta ka qaybgalaan shirka wadatashiga arrimaha Soomaaliya oo ay garwadeenka ka tahay Qaramada Midoobay ee Muqdisho; wafti kale oo 25 xubnood ka kooban oo Puntland ah ay shalay gaaray isla magaalada Muqdisho.
C/raxmaan Xuseen Xasan ‘Gaardi’,